Ukulinda ingane kuyinjabulo enkulu kuwo wonke owesifazane. Kodwa, naphezu kwalokhu, bonke omama abazayo bacabanga ukuthi bayobheka kanjani ukubeletha kokubeletha. Wonke umuntu uyazi ukuthi ngesikhathi sokukhulelwa, awukwazi ukunamathela kunoma yikuphi ukudla kokulahlekelwa isisindo.
Ngesikhathi sokukhulelwa, isisindo sikhula kakhulu, kusuka ku-6 kuya ku-25 kg, kepha awukwazi ukuzikhawulela ekudleni, njengoba kungenzeka ukulimaza ingane ezayo. Uhlala ulinde ukuba ingane ifike emhlabeni, bese nje uthatha izinyathelo zokunciphisa umzimba.
Uma owesifazane ebeletha ingane, isizinda se-hormonal sishintsha emzimbeni wakhe, lona wesifazane uhlangabezana nokucindezeleka ngemva kokubeletha futhi ngokuphindaphindiwe ukucindezeleka okulandelayo. Ukuze ukwelashwa nokuvimbela izimo ezicindezelayo, odokotela bancoma ukuthi banamathele emithethweni yokudla okunempilo futhi bagcine ukudla. Ngakho-ke, lokhu kusho ukuthi ukudla kwesisindo kungalimaza umzimba wesifazane.
Ingane ithola wonke ama-microelements adingekayo, amavithamini, nezidumbu zomzimba ezivela ubisi lomama ukuze kukhule nokuthuthukiswa kwakhe. Konke lokhu kungenye isizathu sokwenqaba ukudla ukuze ulahlekelwe isisindo. Akukhuthazwa ukuhlanza umzimba ngalesi sikhathi nokudlala imidlalo. Ngakho-ke ungayithola kanjani isisindo emva kokubeletha, uma uncelisa, ngaphandle kokulimaza wena noma ingane yakho?
Ukuvinjelwa kokudla ngesikhathi sokudla akusho ukuthi udinga ukudla konke okufunayo nanoma yikuphi okwenziwe. Ukulungiswa okunengqondo kokudla okunomsoco, okuzoba usizo kumntwana, kuzokusiza ugcine isisindo sakho somzimba ngendlela evamile. Yidla izikhathi ezine kuya kweziyisithupha ngosuku ezinxenyeni ezincane, uphuze amanzi amaningi. Ngendlela, isisindo singakhuphuka ngenxa yetshezi esetshenziselwa ukwandisa i-lactation. Abesifazane abanezinkinga ngobuningi bebisi kufanele baphuze amanzi amaningi. Kodwa uma kungenayo izinkinga zobisi, kungenzeka ukuthi kuncishiswe inani lomshini osetshenzisiwe ngosuku, kanti isisindo sizokwehla ngamakhilogremu amaningana. Imikhiqizo ye-caloric, njenge-fatgy yengulube, imikhiqizo yokubhema, amasobho, imayonnaise, njll. Angakulethi izinzuzo, futhi azidingi izinyane, unciphisa amandla okudla kokudla kwakho. Ngomntwana, into esemqoka ukuthola amavithamini, ama-microelements, ama-carbohydrate awusizo, amaprotheni. Ngaphandle kokucwasana nokukhula kwengane, ungashiya imikhiqizo yefulawa namaswidi.
Indlela yokulahlekelwa isisindo ngemuva kokubeletha uma ukondla
Sicela uqaphele ukuthi kusukela ngesikhathi sokunakekelwa okungeziwe ingane ingakwazi ukugcina izidlo eziningana ezilula. Isibonelo, ukudla okuyi-mono kufaneleka kumama abahlengikazi, uma kungapheli usuku olulodwa. Izidlo ze-Mono zingahluka: izinhlanzi, ilayisi, i-kefir, i-apula, njll. Kwabesifazane abahlengikazi, ungancoma ukudla kwe-kefir, njengoba ukudla ilayisi noma i-apula kungalimaza amathumbu omntwana, futhi ukungabi khona kwamanzi okudliwayo kungasongela ukulahlekelwa ubisi. Uma uqaphela ukudla kwe-kefir emini, ungadla kuze kufike ku-2 amalitha we-kefir, akudingeki uthathe uketshezi. Uma izinkinga zendlala ziqinile, ungongeza ngaphezu kokudla ubhanana ababili usuku lonke. Empeleni, ukudla kwosuku olulodwa kufana nomphumela walo ngosuku lokuzila ukudla. Ukufeza le nqubo, omama abahlengikazi akufanele babe ngaphezu kweyodwa njalo emavikini amabili. Ukondla ingane ngokudla kwemvelo kuqala cishe izinyanga eziyisithupha. Ngesikhathi esifanayo, izinga lezigciwane zomzimba ebisini likamama liyancishiswa kakhulu, ngakho-ke ukudla okunomsoco okwesikhashana, okulula okungekho okulimazayo kungamlimaza ingane.
Kumele kuqashelwe ukuthi lapho ingane ifika ezinyangeni ezintathu, izinqubo zokuhlelwa kabusha kwe-hormonal yokuphela komzimba wesifazane. Futhi ngenxa yale nqubo, owesifazane naye ulahlekelwa amakhilogremu ambalwa. Ukulala nakho kuthinta isisindo somzimba. Ososayensi baye bafakazela ukuthi abantu abalele kancane ngokuvamile banesisindo esiningi. Kulabo abanomntwana, umbuzo wokulala nokuphumula unzima kakhulu. Hlela usuku lwakho ukuze ukhululeke emini, isibonelo, lapho ingane yakho ilele. Noma ubuze abantu abaseduze nawe ukuze bakunike ithuba lokuphumula futhi uthathe omunye wesikole ekhaya. Ukulala okungalungile nokuntuleka kokuphumula kungathinta impilo yowesifazane, kwandise ukucindezeleka kokuphuma kwesisu nokucindezeleka, futhi lokhu kungathinta isimo sezempilo nesimo somntwana omncane.
Imisebenzi emikhulu yemidlalo nemidlalo iyaphikisana nabesifazane abondla izingane zabo, kodwa ukuphila okusebenzayo nemfundo yenyama imane nje kudingekile uma ufuna ukwazi ukulahlekelwa isisindo ngemuva kokubeletha uma uncelisa. Uma ungenalo ithuba noma isifiso sokuzivocavoca ekuseni, hamba okwengeziwe, hamba nomntwana emgwaqweni. Kunezindlela ezikhethekile zokulahlekelwa isisindo emva kokubeletha, isibonelo, incwadi yezincwadi "Yoga emva kokubeletha." Ukuzivocavoca kulezi zindlela kuklanyelwe ukucabangela ukusebenza komama osemusha, kungenziwa ngomntwana noma ngisho naye. Uma unethuba lokuya ezinkampanini ezithakazelisayo, bhalisela ukuqeqeshwa kwe-dance belly dance. Ukunyakaza kwalomdanso kuhlelwe yisisu sokubeletha ngemuva kokuzalwa futhi kuzokubuyela kuwe inhlamba encane futhi encane. Uma kungekho nethuba lokudansa noma ngokuvamile ukuphuma ukuhamba, sebenzisa "izindlela zokuzivocavoca" inqubo. Ukuzivocavoca okunjalo kuzokunika ithuba lokuphumula nokuhamba ngesikhathi esifanayo. Ukuze ungakhethi, khumbula ukuthi akunconywa ukunikeza umthwalo oqinile ezandleni, esifubeni, emuva, endaweni yesisu nesisu esiswini sabesifazane abaqeda ngokushesha ngemva kokuzalwa ukuze bangalimazi impilo yabo. Ngeke ukwazi ukuzibandakanya emzimbeni, wenze izivivinyo zamandla, uhlanganyele kuzo zonke izinhlobo ze-simulators. Kubonisa kuphela ukuzivocavoca umzimba nokuhamba.
Uma kwenzeka isisindo singanciphisi isikhathi esithile, kufanele uthintane nodokotela futhi uhlole ukuhlolwa kwezokwelapha okugcwele: hlola isifo se-thyroid, uvivinye ama-hormone, i-cholesterol, inani leshukela egazini, njll. Isizathu singaba sína kakhulu kunemiphumela yokukhulelwa nokubeletha. Lapho ukhetha izinyathelo zokulwa nokukhuluphala ngokweqile ngemuva kokubeletha, isimo esibaluleke kakhulu sinakekela impilo yakho kanye nempilo yengane yakho.
Ukuzalwa kwabesifazane abanekhanda elincane
Indlela yokubukeka encane kuneminyaka yabo: Kudingeka ufunde kulabo abangaphezu kuka-40
I-Home fish ambassador
Izithombe ezahlukene zokuphila komndeni
Qinisekisa futhi ukhanyise: izinwele zifake isinamoni
Inhlama yendabuko yokudoba